विश्वको सबैभन्दा सानो देश सील्याण्डको जनसंख्या २७ मात्र ! - Kendra Khabar
विश्वको सबैभन्दा सानो देश सील्याण्डको जनसंख्या २७ मात्र !
२०७५, ३० कार्तिक शुक्रबार ०७:४४
एउटै परिवारमा २५ देखि ३० जनासम्म हुन्छन् । दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकमा संयुक्त परिवार अझ ठूलो संख्या पनि हुने गर्दछ । तर, कुनै सिंगो मुलुकको जनसंख्या एउटा संयुक्त परिवार भन्दा सानो ! अचम्म लाग्न सक्छ । युरोपको सानो मुलुक सील्याण्डको जनसंख्या २७ मात्र छ । पत्याउनु भएन ?